पाँच उत्कृष्ट टि२० लिग र सर्वाधिक महँगा खेलाडी | Hamro Khelkud
पाँच उत्कृष्ट टि२० लिग र सर्वाधिक महँगा खेलाडी
एजेन्सी – विश्व क्रिकेटमा २१ औं शताब्दीको सुरुवातसँगै टि२० शैलीको क्रिकेट देखा पर्यो । इंग्ल्यान्डबाट सुरु भएको टि२० आइसिसीको मान्यता प्राप्त पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय खेल महिला २००४ र पुरुषको २००५ मा भएको थियो ।
सन् २००७ को टि२० विश्वकपपछि लोकप्रियता ह्वात्तै बढ्यो । २००८ मा भारतले इन्डियन प्रिमियर लिग (आइपिएल) फ्रेन्चाइज लिग सुरु गर्यो । पछिल्लो एक दशकमा सर्वाधिक लोकप्रिय खेल टि२० बनेको छ । टेष्टसँगै एसोसिएट देशमा पनि फ्रेन्चाइज लिगको प्रभाव बढ्दै छ । फ्रेन्चाइज लिग खेलाडीको आम्दानीको मुख्य स्रोत बन्दै आएको छ ।
विश्वमा थुप्रै चर्चित फ्रेन्चाइज लिग छन् । केहि लिग खेलाडीको पहिलो रोजाईमा पर्न थालेका छन् । खेलाडीको स्तर, अक्सनमा लाग्ने बोली, डाफ्टमा पाउने मूल्य लगायत विभिन्नले फ्रेन्चाइज लिगको लोकप्रियता बढ्दै छ । आइपिएल खेलाडीको एउटा सपनानै बनेको छ । आइपिएल सम्म आउन आफ्नो देशबाटसँगै अन्य फ्रेन्चाइज लिगको प्रदर्शन महत्वपूर्ण सावित हुँदै आएको छ । वर्तमान समयका विश्व क्रिकेटका पाँच उत्कृष्ट फ्रेन्चाइज लिग र सर्वाधिक महँगो मूल्य पाउने खेलाडीहरु ।
५. बिपिएल – तमिम इकबाल
बंगलादेश प्रिमियर लिग (बिपिएल) २०१२ देखि सुरु हुँदै आएको छ । बंगलादेशका ओपनर तथा ओडिआई टोलीका कप्तान तमिम इकबाल बिपिएल इतिहासमा सर्वाधिक महँगो मूल्यमा विक्रि हुँने खेलाडी हुन् । तमिमले ढाका पल्टनबाट २०१९/२० को सिजनमा ए प्लस क्याटगेरीमा रहँदै ५० लाख बंगलादेशको अर्थात झण्डै ४२ लाख भारु पारिश्रमिक पाएका थिए ।
उक्त क्याटगेरीमा तमिमसँगै विकेटकिपर मुस्ताफिजुर रहमान, तीव्र गतिका बलर मशरफे मोर्तजा र अलराउन्डर महमुदूल्लाह थिए । तमिम बिपिएलमा सर्वाधिक रन बनाउने दोस्रो खेलाडी हुन् । उनले ८५ खेलमा २ हजार २ सय ७४ रन बनाएका छन् ।
४. सिपिएल– राशिद खान
अफगानिस्तानका लेग स्पिनर राशिद खान विश्व क्रिकेटमा वर्तमान समयमा सर्वाधिक सफल स्पिनर हुन् । म्याच विनर स्पिनर राशिद वेस्टइन्डिजको क्यारेवियन प्रिमियर लिग (सिपिएल) को सर्वाधिक महँगो मूल्य पाउने खेलाडी हुन् । राशिदलाई गत सिजनमा बार्बाडोस ट्राइडर्सले ८१ लाख ५६ हजार भारुमा अनुबन्ध गरेको थियो ।
विश्व क्रिकेटमा आक्रामक शैलीमा भिन्दै पहिचान बनाएको तथा दुई पटकको टि२० विश्वकप विजेता वेस्टइन्डिजले सिपिएल २०१३ देखि सुरु गरेको हो ।
३. पिएसएल– बाबर आजम
पाकिस्तानका कप्तान बाबर आजम पाकिस्तान सुपर लिग (पिएसएल) का सर्वाधिक महँगा खेलाडी हुन् । विश्व क्रिकेटमा पनि बाबरले आफ्नो प्रभाव जमाउँदै आएका छन् । पिएसएलमा बाबरले ५२ खेल खेल्दै १७ अर्धशतकका साथ १ हजार ७ सय ७४ रन बनाएका छन् । सुरुमा इस्लामबाद युनाइटेडबाट पिएसएल खेलेका बाबर पछिल्लो समय कराँची किंग्सबाट खेल्ने गर्दछन् ।
गत सिजनमा बाबरलाई कराँची किंग्सले २ करोड ३० लाख ४४ हजार पाकिस्तानी मूल्य भारतीय रुपान्तरण १ करोड ९ लाख भारु पारिश्रमिक मूल्य दिएको थियो । जुन पिएसएलस इतिहासकै सर्वाधिक बढी हो ।
२. बिबिएल– डार्सी सर्ट
आइपिएल पछि अष्ट्रेलिया बिग ब्यास लिग लोकप्रिय फ्रेन्चाइज लिग मानिन्छ । बिबिएलमा अष्ट्रेलिया ओपनिङ अलराउन्डर डार्सी सर्ट सर्वाधिक महँगो मूल्यमा विक्ने खेलाडी हुन् । सर्टले २०१७/१८ को सिजनमा होबार्ट हरिकेन्सबाट २५८,९०० अमेरिकी डलर भारतीय १ करोड ८९ लाख भारु प्राप्त गरेका थिए । जुन बिग ब्यास लिगमा सर्वाधिक महँगो मूल्य पाउने खेलाडीमा पर्दछन् ।
डार्सीले हालसम्म बिबिएलमा ५७ खेलमा २ शतक र १८ अर्धशतक सहित २ हजार १ सय ९ रन बनाएका छन् । लेगस्पिनर गर्ने उनले २९ विकेट लिएका छन् ।
१. आइपिएल–विराट कोहली
आइपिएल विश्वकै लोकप्रिय फ्रेन्चाइज लिग हो । कतिपयले आइपिएललाई मिनि विश्वकप भन्छन् । भारतीय क्रिकेट टोलीका कप्तान विराटलाई रोयल च्यालेन्जर्स बेंगलोरले २००८ मा अनुबन्ध गरेको थियो । उक्त वर्ष भारतलाई यू-१९ विश्वकप जिताउँदै आइपिएल खेलेका कोहली वर्तमान समय विश्व क्रिकेटका एक उत्कृष्ट ब्याट्सम्यानको रुपमा स्थापित भएका छन् ।
कोहलीले सन् २०१८ देखि आइपिएलमा १७ करोड भारु प्राप्त गर्दै आएका छन् । जुन आइपिएलमा सर्वाधिक महँगो मूल्य पर्छ । यस सिजनको आइपिएलमा दक्षिण अफ्रिकी अलराउन्डर क्रिस मोरिसलाई राजस्थान रोयल्सले १६ करोड २५ लाख भारुमा अनुबन्ध गरेको थियो ।